မဟီဒလ် အဒုလျဒေချ် (အင်္ဂလိပ်: Mahidol Adulyadej; သင်္သကရိုက်: Mahītala Atulyeteja) သည် သယာမ်တိုင်းပြည်၏ သိုင်ခလာပြည်နယ်ကို အပိုင်စားရသော မင်းသားဖြစ်သည်။သူသည် ရာမမင်းဆက်မှ အာနန္ဒာ မဟီဒလ်ဘုရင်နှင့် ဘူမိဗလ် အဒုလျဒေ့က်ျတို့၏ ခမည်းတော်ဖြစ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ခေတ်သစ် ဆေးပညာလောက၏ ဖခင်ဟုလည်း သတ်မှတ်ကြသည်။လက်ရှိ ထိုင်း တော်ဝင်မိသားစုကို တည်ထောင်သူလည်း ဖြစ်သည်။.
တော်ဝင်နန်းတော်၊ ဘန်ကောက်မြို့၊ သယာမ်နိုင်ငံ
သ ပထုမ်နန်းတော်၊ ဘန်ကောက်၊ သယာမ်နိုင်ငံ
မဟီဒလ် မျိုးဆက် (ကျကရီမင်းဆက်)
မင်းသားမှာ စုဠာလင်္ကရဏဘုရင်၏ ၆၉ယောက်မြောက် သားသမီးဖြစ်သည်။မိဖုရား သာဝန် ဝဟာန၏ ၇ယောက်မြောက် သားသမီးဖြစ်သည်။သူ၏ မယ်တော်မှာ သေဆုံးသွားသော သာမန်မိဖုရားများ၏ သားတော်၄ပါးကိုလည်း မွေးစားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အထဲတွင် ရန်ဆစ် ပရာရောဆစ်မင်းသား (နောင်တွင်ချိန်နတ်မင်းသား)မှာ မဟီဒလ်မင်းသား ကလေးဘဝက အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် မင်းသား မဟိုင်ဒေါ၏ အလုပ်များ၌ အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။
မဟီဒလ်မင်းသားမှာ စုဠာလင်္ကရဏတက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ခဲ့သည်။သူသည် သူပိုင်ဆိုင်သော ငွေကြေးများကို သိပ္ပံနှင့် ဆေးပညာလောကအတွက် ပညာတော်သင်ရန် ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။သူသည် ရော့ဖယ်လာဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ညှိနှိုင်းကာ တက္ကသိုလ်၏ ညံ့ဖျင်းသော စာပေဆိုင်ရာအခြေခံများကို ကူညီခဲ့သည်။
သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက် အမွေအနှစ်များသည် ယွ့ထက်တိုင် ကျန်ရှိနေသေးသည်။သူ၏ငွေများဖြင့် ပညာတော်သင် စေလွှတ်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ခေတ်သစ်ဆေးပညာလောက၏ အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်လာသည်။အချို့မှာ ဆရာကောင်းများဖြစ်လာပြီး အချို့မှာ ဆေးပညာ ကောလိပ်နှင့် တက္ကသိုလ် အသစ်များ တည်ထောင်ရန် ကူညီခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းတွင် တော်ဝင်ဆေးပညာကောလိပ်မှာ Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Chulalongkorn Universityဖြစ်လာခဲ့သည်။၁၉၄၃ခုနှစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်က ဆေးတက္ကသိုလ်၏ အဓိကဖြစ်လာသည်။၁၉၆၉ခုနှစ်တွင် ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ မဟီဒလ်တက္ကသိုလ်ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် မဟီဒလ်မင်းသား ပညာတော်သင်ဆုကို စတင်ခဲ့ကာ ဆေးပညာ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေး ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုဖြစ်သည်။သူ၏ နတ်ရွာစံရာနေ့ဖြစ်သော စက်တင်ဘာ ၂၄ရက်နေ့ကို ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြန်တမ်းဝင် ရုံးပိတ်ရက်များတွင် မဟီတလနေ့ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။
↑ William H. Becker. "Assets: Rockefellerfoundation." Rockefellerfoundation. 2013. https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20131001203515/Innovative-Partners.pdf Archived 20 December 2016 at the Wayback Machine. (29 November 2016 ที่เข้าถึง).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟီတလ_အတုလျေတေဇ&oldid=624174" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။